တာလီဘန် - ဝီကီပီးဒီးယား
တာလီဘန် (Dari: طالبان ၊ အဓိပ္ပာယ်၊ ကျောင်းသား သို့ ဖွေရှာသူ‎) သည် ဒီယိုဘန္ဒီအစ္စလာမ် ဘာသာရေး-နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်ကာ စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှာ အာဖဂန်နစ္စတန်၌ ရှိသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်လိုသူများအဖြစ် ၎င်းတို့ဘာသာ ဖော်ညွှန်းလေ့ ရှိသည်။  သို့သော် အစိုးရနှင့်အဖွဲ့အစည်း အများစုက အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြ၏။ 
၁၉၉၆-၂၀၀၁ ကာလတွင် တာလီဘန်တို့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်မြေ၏ လေးပုံသုံးပုံကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းနယ်မြေတို့တွင် တင်းကြပ်သော ရှရီယာ ခေါ် အစ္စလာမ္မစ်ဥပဒေကို ကျင့်သုံးသည်။ ၁၉၉၄ ခုတွင် အာဖဂန်ပြည်တွင်းစစ်၏ စစ်ကျန်အပိုင်းအစအဖြစ် ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တောင်ပိုင်း ပါရှတွန်ဒေသရှိ ရိုးရာအစ္စလာမ္မစ်ကျောင်းတို့တွင် ပညာသင်ခဲ့သော ကျောင်းသားအများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဆိုဗီယက်-အာဖဂန်စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ဖူးသူများဖြစ်၏။ မိုဟာမက်အိုမာ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်တွင် ယင်းလှုပ်ရှားမှုမှာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအနှံ့သို့ ပျံ့သွားပြီး ဒေသအသီးသီးတွင် မင်းမူနေသော မူဂျာဟစ်ဒင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ဩဇာကို ညှိုးငယ်စေခဲ့သည်။ တပါတီ အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံကို ၁၉၉၆ ခုတွင် တည်ထောင်နိုင်ပြီး မြို့တော်ကို ကန္ဒဟာသို့ ပြောင်းသည်။ ယင်းမှသည် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက် အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့က ဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်မီအထိပင်တည်း။ ယင်းအဖွဲ့အားကောင်းစဉ်က ပါကစ္စတန်၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနှင့် အာရပ်ပြည်ထောင်စုကသာ ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ အမေရိကန်တို့ဝင်သည်နောက် နေတိုးဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးတပ်ကူနှင့် အမေရိကန်နောက်ခံရှိသော ကာဇိုင်းအစိုးရကို တော်လှန်ရန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အဖြစ် ပြန်လည်စုဖွဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာမှ ရှရီယာဥပဒေဖြင့် အာဖဂန်သားတို့အား ရက်စက်စွာပြုမူလေ့ရှိသော တာလီဘန်တို့ကို အစဉ် ရှုံ့ချလေ့ ရှိသည်။ မူဂျာဟစ်တို့နှင့်တိုက်စဉ်က ဖြတ်လေးဖြတ်နည်းစဉ်အတိုင်း လယ်ယာအိုးအိမ်တို့ကို မီးတိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်သည် ၁၉၉၆-၂၀၀၁ ကာလတွင် ကုလသမဂ္ဂမှထောက်ပံ့သော စားနပ်ရိက္ခာတို့ကို ငြင်းပယ်ကာ အာဖဂန်ပြည်သူ ၁၆၀,၀၀၀ အား ငတ်သေအောင် အလွဲစီမံဖူးသည်။ လူမှုရေးလုပ်ရှားမှုများကို တားမြစ်ပြီး မီဒီယာကို ပိတ်ပင်သည်။ ပန်းချီ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ မလုပ်မဆောင်ရဟု ကန့်သတ်သည်။ ဘာသာရေးအရ အသုံးပြုနိုင်သော ဒပ်ခေါ် ဗုံပြားမှတပါး အခြားဂီတတူရိယာများ မတီးမမှုတ်ရ။ မိန်းမငယ်များ ကျောင်းသွားခွင့်မပြုသလို အမျိုးသမီးတို့လည်း ပြင်ပအလုပ် ပေးမလုပ်။ အမျိုးသားဆရာဝန်များအား မိန်းမတို့ကို ဆေးကုခွင့် မပေး။ (အမျိုးသမီးဆရာဝန်မှာ အလွန်ရှားပါးသဖြင့် ရောဂါဖြစ်သော မိန်းမမှာ သေရန်သာ ရှိသည်။) အပြင်ထွက်လျှင် ခင်ပွန်းသို့ အမျိုးအဆွေယောက်ျား ပါရန်လိုပြီး ဘူခါ ခေါ် ကိုယ်လုံးပြည့်ဝတ်ရုံ ဆင်ထားရန် လိုသည်။ စည်းကမ်းမလိုက်နာသော အမျိုးသမီးကို လူမြင်ကွင်းတွင် ကြိမ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ ကွပ်ခြင်းတို့ ပြုလေ့ရှိသည်။ တာလီဘန်တို့သည် ယဉ်ကျေးမှုဖျောက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိရာ အခြားဘာသာရေးအဆောင်အဦ အထိမ်းအမှတ်များကို ဖျက်ဆီးတတ်ပြီး ယင်းတို့အနက် ကျော်ကြားသော နှစ် ၁၅၀၀ သက်တမ်းရှိ ဘမီယန် ဗုဒ္ဓဆင်းတုများလည်း အဝင်အပါဖြစ်သည်။
↑ Post, The Jakarta. "US welcomes Qatar decision on Taliban name change". The Jakarta Post. Retrieved7February 2017.
↑ "Currently listed entities". Public Safety Canada. Retrieved 23 October 2014.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တာလီဘန်&oldid=697885" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။